Global Technology Group | 5BB Broadband (Global Technology Company) က ဖောင်ကြီး ထပ်တိုး ကုသရေး အဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ကံ့ကော်ဆောင် ၊ပိတောက်ဆောင် ၊ ICU အဆောင်များ စသည်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Data Communication ကွန်ယက် စနစ်များကို တပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
5BB Broadband (Global Technology Company) က ဖောင်ကြီး ထပ်တိုး ကုသရေး အဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ကံ့ကော်ဆောင် ၊ပိတောက်ဆောင် ၊ ICU အဆောင်များ စသည်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Data Communication ကွန်ယက် စနစ်များကို တပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
အားတင်းထားကြမယ် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့ သင်တို့အတွက် 5BB အဖွဲ့သားများက အမြဲရှိနေမှာပါ ?? 5BB မှ ဖောင်ကြီး COVID-19 ကုသရေးစင်တာ ထပ်တိုး ကုသရေး အဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ကံ့ကော်ဆောင် ၊ပိတောက်ဆောင် ၊ ICU အဆောင်များ စသည့် ထပ်တိုးဆောင်များအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော Data Communication ကွန်ယက် စနစ်များကို အစမှအဆုံး ပိုးမွှားအန္တရာယ်များကြားမှ ကုသရေးလုပ်နေတဲ့ ဆရာဝန်ကြီးများ ၊ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနည်းတူ 5BB Broadband မှ နည်းပညာရှင်များ Engineer များမှ တက်စွမ်းသမျှဝင်ရောက်တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါတယ် ⚡️နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆရာဝန်ကြီးများ၏ကုသရေးစနစ်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ Data Communication များအတွက် #5BB ?‍⚕️?‍⚕️ဖောင်ကြီးတွင် ကုသနေကြသော အထွေထွေရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် ဖောင်ကြီးမှ ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ပြင်ပမှ ထူးချွန်ဆရာဝန်များ ပေါင်းစပ်ကုသဖို့အတွက် အဓိက လိုအပ်သည့် Data Communication များအတွက် #5BB ⚡️အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Covid 19 ကူးစက်နေကြသည့် ဝေဒနာရှင်များအတွက် သူတို့ရဲ့ မိသားစုများ ၊ချစ်ရခင်ရသူများနှင့် ဆက်သွယ်ပေးနိုင်မည့် Data Communication များအတွက် #5BB ?‍♂️Covid 19 ဆိုတာ World Health Organization (WHO) နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့်အတိုင်း Covid 19 ရောဂါသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရှိလျှင် ပိုမို အန္တရာယ်ရှိတာဖြစ်လို့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့လူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်စကားပြောနိုင်တဲ့အခါ ပြေပျောက်သွားစေဖို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနွေးထွေးမှုပေးနိုင်ဖို့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ပျောက်ကင်း စေနိုင်ဖို့ အဓိကလိုအပ်မည့် Data Communication များအတွက် #5BB မှ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ?‍?‍?‍??‍?‍?‍? ⚡️Covid 19 မုန်တိုင်းစတင်ကတည်းက ကူနေတာ Covid 19 မုန်တိုင်းအလယ်ရောက်သည့်တိုင်ကူနေဆဲပဲ Covid 19 မုန်တိုင်းပြီးသွားသည့်တိုင် ကူနေအုံးမှာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ အမြဲရှိနေမှာ 5BB ပါ?? #နှာခေါင်းစည်းတပ်ပါ #ခပ်ခွာခွာနေပါ #လက်ဆေးပါ